As of Tue, 07 Jul, 2020 22:50
डडेल्धुराका तीनवटा नयाँ सडक कालोपत्रे हुने भएका छन् । तीनवटा सडक खण्डको ३२ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने कार्य यसै वर्षदेखि सुरु हुन लागेको हो । जिल्लाको गाईबाँधे–लिप्ना, उग्रतारा–मेलौली र पोखरा–बेलापुर–ढुंगाड सडक कालोपत्रे हुने भएका छन् । उग्रतारा–मेलौली सडक खण्डको १० किलोमिटर, पोखरा–बेलापुर सडक खण्डको १० किमि र गाईबाँधे लिप्ना सडक खण्डको १२ किमि सडक कालोपत्रे हुन थालेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गरिरहेको ग्रिडमा आवद्ध सोलार आयोजनाको १.२५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । २५ मेगावाट जडित क्षमता आयोजनाको बुधबारबाट बल्ल १.२५ मेगावाट ग्रिडमा जोडिएको हो । सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् देवीघाट विद्युत्गृहको सवस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ । दिउँसो घाम लागेका आधारमा १.२५ जडित क्षमताको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चा फेरि हुन थालेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सेती परियोजना समेटिएपछि यस परियोजनाको चर्चा चलिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमाक्षेत्र निर्माण हुने भनिएको ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजना लामो समयदेखि चर्चामा रहेको छ ।
जिल्लामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट चालू आवका लागि विनियोजन गरेको बजेटबाट विकास निर्माणको काम धमाधम सुरु भएको छ । स्थानीय सरकारले सम्झौता गरेका योजनाको काम धमाधम सञ्चालन गरेका छन् ।
मदन भण्डारी राजमार्ग अन्र्तगत उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटदेखि नेपालटारसम्मको २७ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य पूरा भएको छ । गाईघाट — नेपालटार खण्डमा ( पहिलो चरणको कालोपत्रे) डेन्स बिटुमिनस् कंक्रिटको काम सकिएकै बेला कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि डेढ महिना सडक निर्माण कार्य अबरुद्ध भएको थियो । बन्दाबन्दी कायमै रहेका बेला गत बैशाख २२ गतेबाट पुनः निर्माण कार्य सुचारु गरिएको यस खण्डमा (दोस्रो चरणको कालोपत्रे) अस्फाल कंक्रिटको काम भएपछि २७ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
सरकारले घोषणा गरेको बजेटको छुटका कारणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ८ लाख ग्राहस्थ (घरेलु) ग्राहकले निःशुल्क विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट वक्तव्यमा प्रतिमहिना १० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहक (परिवार) लाई विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार, विद्युत्का करिब ४१ लाख ग्राहस्थ ग्राहकमध्ये त्यस्ता ग्राहकको संख्या ८ लाख छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमसँगै उत्तरी लमजुङको न्यादी जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण सुरु गरेको विद्युत प्रशारणलाइन कार्य प्रभावित भएको छ । लकडाउनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र जनशक्ति अभावका कारण विद्युत् प्रशारणलाइन निर्माणकार्य प्रभावित भएको हो । मस्र्याङदी गाउँपालिका–६, न्यादी खोलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनाले नौ किलोमिटर राष्ट्रिय प्रशारणलाइन निर्माण सुरु गरेको थियो । मस्र्याङ्दी करिडोरमा निर्माण हुने भनिएको २२० केभी राष्ट्रिय प्रशारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ हुनेभएपछि आयोजना आफैले १३२ केभी प्रशारणलाइन निर्माण सुरु गरेको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका काम गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार पारेको छ । मापदण्डलाई शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको हो । मापदण्डमा निजी आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पदालागयतका क्षेत्रमा बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कामहरूलाई सुचारु गर्दा कार्यस्थल व्यवस्थापन, सामग्री आपूर्ति, जनशक्तिको कार्य व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला पक्षको भूमिका उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले मापदण्ड तयार भएकाले अब पुनर्निर्माणका कामअघि बढाउन सहज हुने बताए ।
नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमार्फत नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको हो । आर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा बिहीबार नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले सुदूरपश्चिमको राजधानीका लागि बजेट छुट्याएको जनाए पनि बजेटको आँकडा बताएनन् ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र संघीय राजधानी काठमाडौं जोड्ने हेटौंडा–काठमाडौं छोटो मार्गमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न संघीय सरकारले तत्परता देखाएको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी काम सुरु गर्ने उल्लेख छ । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गसहित अन्य दुई स्थानमा सुरुङमार्ग र सडक स्तरोन्नतीसमेतका लागि ६ अर्ब ४२ करोड छुट्याइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले २ वर्षदेखि सुरुङमार्ग निर्माणलाई २ वर्षदेखि प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा ऊर्जातर्फ चालू वर्षभन्दा घटेको छ भने सिँचाइतर्फ बढेको छ । चालू वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ८३ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा १२ अर्ब घटेको छ भने सिँचाइतर्फ ४ अर्ब बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड २४ लाख बजेट रहेकोमा संघका लागि ९९ अर्ब २९ करोड ४८ लाख छ भने प्रदेशमा ५ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख तथा स्थानीय ६६ करोड छ ।
काठमाडौंबाट बाहिरिने भित्रिनेलाई पहिलो चिन्ता नागढुंगाको ट्राफिक जाममा परिन्छ कि भन्ने नै हुन्छ । नहोस् पनि कसरी ५२ वर्षअघि तत्कालीन अवस्थामा रहेको मालवाहक तथा यात्रुबाहक गाडीको भारबहन क्षमतालाई निर्धारण गरेर निर्माण गरेको सडक हो त्रिभुवन राजपथ । अहिले सडकको भारबहन क्षमताभन्दा निकै बढी क्षमता र लामो लामो मालबाहक गाडी गुडछन् । नगुडुन् पनि कसरी यस सडकको विकल्पमा अन्य सडक छैनन् काठमाडौँ छिर्न । सडकको भारबहन क्षमताभन्दा बढी क्षमताका मालबाहक गाडी गुड्दा कोलोपत्रे भत्कन्छ र सडक खाल्डाखुल्डी हुन्छ । उकालो सडकमा क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका गाडी र सडकको घुम्तीभन्दा लामो गाडी बिग्रेर प्रायः जसो जाम हुने गर्दछ । ट्राफिक जाम खासगरी चाडपर्वका बेला हुँदै आएको छ भने सामान्य ट्राफिक जाम नियमित जस्तै हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) को बजेट तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समृद्धिको संवाहक क्षेत्र ऊर्जालाई बनाउने भन्दै धेरै लक्ष्यसहित आयोजनाको अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए । तर, अधिकांश पूरा हुन सकेनन् । चैतदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रभाव परेपनि चैत्र अगावै सम्पन्न हुने कतिपय आयोजनाहरू पुरा हुन सकेनन भने घोषणा गरिएको लक्ष्य पनि पुरा भएनन् । चालू आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) को बजेट तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समृद्धिको संवाहक क्षेत्र ऊर्जालाई बनाउने भन्दै धेरै लक्ष्यसहित आयोजनाको अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए ।